के तपाँई बिहानै खाली पेटमा चिया पिउनुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस, तपाँईलाई यस्तो हुन पनि सक्छ.. – Nayabook
के तपाँई बिहानै खाली पेटमा चिया पिउनुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस, तपाँईलाई यस्तो हुन पनि सक्छ..
हान–बिहानै खाली पे’टमा चिया पिउने बानी धेरैजसोको हुन्छ । तर, खाली पेटमा चिया पिउँ’नाले एसि’डिटी हुनसक्छ । किनकि यसमा भएको टे’निन्स पेटको एसिडलाई बढाई दिन्छ । थाहा पाउनुहोस्, खाली पेटमा चिया पिउँनाले के–कस्ता गम्भिर रोग लाग्छन् ।
अहिलेको मानिसह:रुमा ग्याʼस्ट्रिक बढ्दो छ । समयमा खाना नखानाले, खाना खाए पनि भोको पेटमा चिल्लो पदार्थ भएको खाना खाँदा त्यो चिल्लोले गर्दा ग्या’स्ट्रिक बढ्दै जान्छ । यसरी आमा:सयको खाना नलिमा जोडिएको सानो आ’न्द्राको मुखमा घाउ बन्न सक्दछ ।